iPhone 12 Pro Max Model Number A2342, A2410, A2411, A2412 - Qalabka
iPhone 12 Pro Max Model Number A2342, A2410, A2411, Noocyada A2412
Apple waxay dhawaan soo saartay iPhone-keedii ugu dambeeyay iyada oo loo marayo dhacdadeeda Hi-Speed. Dhacdadii Oktoobar 13 waxay na siisay ku darista taxanaha. Waxaa jira afar iphone cusub oo laga heli karo suuqa. Waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo telefoon isku mid ah oo laga heli karo suuqa maalmahan. Tilmaamahan, waxaan ku daboolaynaa iPhone 12 Pro Max. Waa taleefoonkii ugu weynaa ee soo mara 2020 oo leh gambaleel iyo foori oo dhan.
Qiimaha qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa $ 1099 aad u tiro badan illaa $ 1399. Habka ugu muhiimsan ee Apple wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo adduunka ah. Tilmaamahan, waxaan ka hadlaynaa moodooyinka A2342, A2410, A2411, A2412.
Astaamaha iPhone 12 Pro Max:
IPhone Pro Max wuxuu la yimaadaa qaar ka mid ah astaamaha cajiibka ah. Waxay u keenaysaa tayo iyo qummanaan isticmaalkaaga casriga ah. Waxaan kugula talineynaa aaladda dhammaan akhristayaashayada leh miisaaniyadda. Aynu ka wada hadalno faa'iidooyinka wanaagsan ee isticmaalka iPhone 12 Pro Max.
1. Shaashad ballaadhan
Pro Max wuxuu la socdaa shaashad dhan 6.7 ”, taas oo ku habboon dadka doonaya shaashad ballaaran. Waxay leedahay tanno shaashad ah oo loo heli karo isticmaalkaaga.
2. Qalabaynta kamarad saddex-laab ah
Saddexda kamaradood ee dhabarka ka dhigayaa wax weyn iibsi. Qalabka Apple waxaa loo yaqaanaa dareemayaal tayo sare leh. Waxaad guji kartaa sawirada aadka uquruxbadan adoo maraya degelkan. Waxay kaloo keentaa xasilinta muuqaalka muuqaalka. Muraayadda taleefanka ayaa ku habboon isticmaalkaaga.
Ku daris weyn oo ku saabsan safka iPhone waa tiknoolajiyadeeda MagSafe. Waxay faa'iido u tahay lacag-bixinta fudud. Waxaad ku arki kartaa natiijooyinka degdegga ah farsamadan.
4. Isku xirnaanta 5G
Teknoolojiyaddii ugu dambeysay ee 5G ayaa hadda si hufan loogu heli doonaa. Apple waxay ka shaqeyneysaa sidii loo dhameystiri lahaa khibrada cusub ee SIM.
Apple weli waxay mar kale tallaabo hore u qaadaysaa soo bandhigiddooda. Isticmaalayaasha waxay heli karaan marinka Super Retina XDR Display. Dhaldhalaalka ayaa yar, waxaadna la kulmi kartaa muuqaalka muuqaalka kore.
Waxaa jiray dib u habeyn guud oo ku saabsan qaabeynta aaladda sidoo kale. Waad arki kartaa qaar ka mid ah waxtarka degdegga ah markaad ka casriyeynayso jiilal dhawr ah oo kaa horreeyey. Kuwani waa ku darista guud ee daabacaad kasta oo iPhone ah.
iPhone 12 Pro Noocyada Max:
IPhone 12 Pro Max wuxuu la yimaadaa lambarro taxane ah oo kala duwan. Kuwani waxay halkaa u joogaan inay kaa caawiyaan aqoonsiga goobta. Waxaad heli kartaa nooc gaar ah iyadoo kuxiran meesha aad adduunka ka joogto. Noocyadani aad ayey isugu egyihiin muuqaalka. Waxaa jira dhowr isbeddel oo ku yimaada qaabdhismeedka gudaha qalabka. Waa kuwan kala-goynta gobolka ee caqliga badan ee iphone-yadan.
Nooca waxaa loo heli karaa iibka kaliya suuqa Mareykanka. Users waxay ka iibsan karaan tan dukaanka tufaaxa rasmiga ah ama websaydhkooda internetka. Waa qaabka ugu fiican ee loogu talagalay isku xirayaasha xiisaha leh.
Isticmaalayaashu waxay marin u helaan shabakadda 5G ee ugu dhaqsaha badan moodeelkan. Nidaamka mmWave ayaa laga doorbidayaa isku xirnaanta xawaaraha sare.Isticmaalayaasha waxay arki karaan farqi yar oo muuqaalka jirka ah sidoo kale. Anteenada shabakadaha ayaa muhiimad weyn ku leh qalabkan.
Qaabka A2410 waxaa heli kara isticmaaleyaasha keliya Kanada iyo Japan. Labada dal waa ku kala duwan yihiin heerarka badbaadada muwaadiniintooda.
Telefoonku wuxuu sidoo kale taageeri doonaa laba sims iyada oo loo marayo qaabkan. Waxay ku timaaddaa adeegga e-SIM. Awoodda 5G sidoo kale waa jiraan, laakiin way ka duwan tahay qaabka USA.
Waa nooca loo iibgeeyo adduunka oo idil. Waxaa loogu yeeri karaa nooca caalamiga ah ee qalabka iPhone 12 Pro Max. In ka badan 100 + waddan ayaa marin u heli doona nooca aaladda Apple. Waxay aad ugu egtahay nooca A2310.
Waxay sidoo kale la timaaddaa awoodaha sim sim. Waxaad ku isticmaali kartaa nano-sim iyo e-sim aaladda.
Isticmaalayaashu waxay arki karaan noocyadan oo caan ku ah Hong Kong, Shiinaha, iyo Macau. Gobollada bariga Aasiya waxay leeyihiin xannibaadyo gaar ah oo meesha yaal. Apple waa summad caalami ah oo dooneysa in si fudud looga adeegsan karo meel kasta.
Waxay ku bixiyaan qalab gaar ah gobolladaas oo keliya. Xayiraadaha internetka ee dhul weynaha Shiinaha waa xaqiiqo maalinle ah. Inta badan barnaamijyada reer galbeedku waxay u baahan yihiin in la xaddido. Telefoonku wuxuu kaloo taageeraa laba kaar oo nano sim ah.
Moodooyinka kala duwan ee iPhone 12 Max Pro waxay ku habboon yihiin isticmaalkaaga fudud. Waxay muhiim u tahay isticmaaleyaasha doonaya inay helaan qalabkii ugu dambeeyay ee Apple. Waxaan rajeyneynaa inuu hagaheena awood u yeeshay inuu ku siiyo macluumaadka ku saabsan noocyada kala duwan.
10 Best Lugood Beddelka
Sidee loo Hagaajiyaa Hulu Aan Shaqeynin Arrimaha?
Nvidia Geforce RTX 3060 Ti - Wax Walba Waa La Sharaxay
links si uu u daawado filimada online for free aan degsado
shows tv xakameynta goobaha google
cayaaraha iskutallaabta ps4 xbox
daawashada filimada hadda online lacag la'aan ah
ma goobta laga helay heli saaxiibaday
youtube si mp3 download free